चितवनमा तामाङ फिल्मको विशेष प्रदर्शन गर्दै तामाङ पत्रकार संघ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चितवनमा तामाङ फिल्मको विशेष प्रदर्शन गर्दै तामाङ पत्रकार संघ
रत्ननगर । तामाङ पत्रकार संघ चितवनले खैरहनीमा तामाङ फिल्मको बिशेष प्रदर्शन गर्ने भएको छ । यहि असोज २८ गते ग्रामीण तामाङ समाजको चित्रण गरिएको मौलिक फिल्म आप्लेगंला नाम्सा (मित बाऊको गाँऊ) देखाउन लागिएको तामाङ पत्रकार संघका सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक राजेश रुम्बाले बताए।
खैरहनीको पर्सास्थित खैरहनी पार्टि भेन्युमा फिल्म प्रदर्शनका लागि तयारी तीव्र भइरहेको उनको भनाई छ। फिल्मको माध्यमबाट भाषा, भेषभुषा, संस्कृति र परम्परागत रितिरिवाज बर्तमान पुस्तासमक्ष पुर्याउन मद्दत पुग्ने संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तामाङले बताए।
यसबाट सांस्कृतिक जागरुकतासमेत बढ्ने उनको भनाई छ। अजय स्याङतानको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा तामाङसहित नेपाली र ह्योल्मो भाषा प्रयोग गरिएको छ। सेन्सरबाट पिजी सर्टिफिकेट पाएको फिल्मको कथा धोर्जे तामाङले लेखेका हुन्।
शेखर लामा कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मलाई छेम्बल ह्योल्मोले निर्माण गरेका हुन्। यसअघि फिल्मको देशका विभिन्न शहरहरुमा च्यारिटि शो तथा बिशेष शो गरिसकेको छ।